“Novoland: Pearl Eclipse” ဇာတ်လမ်းတွဲကတော့ ထိပ်တန်းမင်းသမီးချော Yang Mi နဲ့အတူ Chen Wei Ting နဲ့ Xu Kai Cheng တို့ကလည်း အဓိကဇာတ်လိုက်တွေအဖြစ် ပါဝင်ရိုက်ကူးထားတာကြောင့် စတင်ရိုက်ကူးချိန်ကတည်းက လူအများစိတ်ဝင်စားပြီး ကြည့်ရဖို့ အားခဲထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းပါ။ အပိုင်းပေါင်း ၅၅ ပိုင်းအထိပါဝင်မယ့်အကြောင်း လိုင်စင်ကျကတည်းက ကြေညာပြီးသားဖြစ်လို့ ထွက်လာမယ့်နေ့ကို လက်ချိုးရေတွက်ရင်း မျှော်နေခဲ့ရပါတယ်။
စက်တင်ဘာလ (၉) ရက်နေ့တုန်း ပြသခွင့်လိုင်စင်ရခဲ့တဲ့ “Novoland: Pearl Eclipse” ဟာ ၂ လနီးပါးကြာမြင့်ပြီး နိုဝင်ဘာလ (၇) နေ့မှာပဲ ထုတ်လွှင့်ပြသမယ့်နေ့ကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ လူအများက စောင့်စားနေတဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းသစ်ကိုတော့ နိုဝင်ဘာလ (၁၀) ရက်နေ့မှာ Tencent မှ စတင်ပြသတော့မှာပါ။
၂၀၂၀ ကတည်းက Hot နေခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းဖြစ်တာကြောင့် ကြည့်ရဖို့သိပ်မလိုတော့ပါဘူး။ ဇာတ်လမ်းအကျဥ်းကတော့…Zheng မင်းဆက်လက်ထက် Novoland လို့ အမည်ရှိတဲ့သမုဒ္ဒရာမှာ မှော်ဆန်တဲ့ ပုလဲတစ်လုံးထွက်ပေါ်လာမယ်လို့ သတင်းတွေရရှိပြီးနောက် ဒီပုလဲကို ရှာဖွေပိုင်ဆိုင်ဖို့ လူတိုင်းကြိုးစားလာခဲ့ပါတော့တယ်။
Naga မျိုးနွယ်ဝင် အပျိုစင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ မျက်ရည်ကနေသာ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် ဒီမှော်ဝင်ပုလဲလေးကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက် မျိုးနွယ်တစ်ခုလုံး သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့အထိ ဒုက္ခပင်လယ်ဝေခဲ့ရရှာပါတယ်။ အကျိုးဆက်အနေနဲ့ Hai Shi (Yang Mi) ဟာ သူမရဲ့မိဘတွေတင်မကဘဲ မျိုးနွယ်စုတစ်ခုလုံးပါဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး အခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်နေရချိန် နန်းတွင်းအရာရှိဖြစ်တဲ့ Fang Zhu (Chen Wei Ting) က သူမကို ကယ်ဆယ်ခဲ့ပြီး တပည့်တစ်ယောက်အဖြစ် လက်သပ်မွေးခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးအရှုပ်အထွေးတွေဖြစ်ပေါ်နေပေမဲ့ ဘုရင်ဖြစ်သူ Chi Zhong Xu (Xu Kai Cheng) ကတော့ အခြေအနေတွေပိုဆိုးလာအောင်သာ ဖန်တီးနေခဲ့တာကြောင့် ပဋိပက္ခတွေ များသထက်များလာပါတော့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ Fang Zu ရဲ့ ကူညီထောက်ပံ့မှုကြောင့် အခြေအနေအရပ်ရပ်က တိုးတက်လာခဲ့ပြီး Hai Shi ကလည်း ဘုရင့်ရဲ့ တော်ဝင်သက်တော်စောင့်ဖြစ်လာပါတော့တယ်။
အနေနီးစပ်လာတော့ Hai Shi ဟာ ဘုရင့်အပေါ် မေတ္တာရှိလာခဲ့ပေမဲ့ ဘုရင်ဖြစ်သူက အထင်လွဲလာပါတော့တယ်။ ဒါပေမဲ့ Hai Shi က မိန်းကလေးဆိုတဲ့အဖြစ်မှန်ကို ဘုရင်က သိရှိသွားတဲ့အချိန် ပြန်လည်မေတ္တာရှိသွားမှာလား? Hai Shi ရဲ့တကယ့်ခံစားချက်အစစ်အမှန်က ဘယ်သူ့အပေါ်မှာလဲ?
သူမတကယ်ချစ်နေတဲ့သူက ဘုရင်ဖြစ်သူ Chi Zhong Xu လား? ဆရာဖြစ်သူ Fang Zhuလား? စဖြင့် အချစ်ဇာတ်လမ်းကောင်းကိုမှ ရှေးဟောင်းနန်းတွင်းဇာတ်လမ်းပုံစံနဲ့ ရှုပ်ထွေးဆန်းပြားစွာ ရိုက်ကူးထားပါတယ်။ နိုဝင်ဘာလ (၁၀) ရက်နေ့မှာ စတင်ပြသတော့မှာဖြစ်လို့ စိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်နိုင်ပါပြီ။
Next BTS ထဲမှာ စလို့နောက်လို့အကောင်းဆုံး အဖွဲ့ဝင်အစ်ကိုတွေကို ရွေးပေးခဲ့တဲ့ Jungkook »
Previous « New York life ရဲ့ အေးငြိမ်းတဲ့အရသာကို အပြည့်အဝခံစားနေသူလေး Rosé
ပရိတ်သတ်တွေ စိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့ Yang Mi နဲ့ Jackie Chan တို့ရဲ့ အတိတ်က အကြောင်းအရာတစ်ခု
ကျန်တဲ့နေရာသဘောကောင်းပေမဲ့ EXO-L တွေနဲ့ပက်သက်ရင် သဝန်တိုအူတိုတတ်တဲ့ Baekhyunee
Instagram က selfie ပုံတစ်ပုံနဲ့ ပရိသတ်​​တွေကို အံ့အားသင့်​စေခဲ့တဲ့ မင်းသား Lee Jung Jae နဲ့ V